နှစ်ဦးသား နောက်ပြောင်နေတတ်တာ ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဆိုတဲ့ ဖြိုးလေးနဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး - Zeekwat Hot News
July 30, 2019056
တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ချစ်သူဘ၀လေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ ဖြိုးလေးနဲ့ ၀ါဆိုတို့အတွဲလေးက မြင်ရသူတိုင်းကို ကြည်နူးစေပါတယ်။ သွားအတူ လာအတူ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်လို တွဲမြင်ရတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးက လက်ရှိမှာ ချောင်းသာကမ်းခြေကို အပန်းဖြေဖို့အတွက် ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။
သူတို့အတွဲလေးက ခပ်တည်တည်ကြီးနေတတ်ကြတာ မဟုတ်ဘဲ စနောက်ပြောင်တတ်ကြတယ်လို့ ၀ါဆိုက ဆိုပါတယ်။
“ကိုယ်တွေ ဒီလိုပြောင်နောက်နေတတ်တာ ဘယ်သူမှမသိကြဘူးမလား???🤪😄” ဆိုပြီး ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့ ည (၈) နာရီလောက်က ၀ါဆိုရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့က ၀ါဆိုမိုးဦးရဲ့ အသက် (၂၅) နေ့ပြည့် မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းများက birthday surprise လေးများ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖြိုးလေးက ချစ်သူ သဘောကျနေတဲ့ အိတ်လေးကိုပါ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာကြောင့် ၀ါဆိုတစ်ယောက် အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်များကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲများထဲက တစ်တွဲဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးလေးနဲ့ သရုပ်ဆောင်- အဆိုတော် ၀ါဆိုမိုးဦးတို့အတွဲလေးက သူတို့ရဲ့အနုပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်မှုကိုယ်စီ ရရှိထားကြတဲ့ သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်း (၃) နှစ်ကျော် (၄) နှစ်နီးပါး ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့အတွဲလေးက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး surprise လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
တဈဦးအပျေါ တဈဦး နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ခဈြသူဘဝလေးကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနကွေတဲ့ ဖွိုးလေးနဲ့ ဝါဆိုတို့အတှဲလေးက မွငျရသူတိုငျးကို ကွညျနူးစပေါတယျ။ သှားအတူ လာအတူ နှဈကိုယျ့တဈစိတျလို တှဲမွငျရတဲ့ သူတို့စုံတှဲလေးက လကျရှိမှာ ခြောငျးသာကမျးခွကေို အပနျးဖွဖေို့အတှကျ ရောကျရှိနကွေပါတယျ။
သူတို့အတှဲလေးက ခပျတညျတညျကွီးနတေတျကွတာ မဟုတျဘဲ စနောကျပွောငျတတျကွတယျလို့ ဝါဆိုက ဆိုပါတယျ။
“ကိုယျတှေ ဒီလိုပွောငျနောကျနတေတျတာ ဘယျသူမှမသိကွဘူးမလား???🤪😄” ဆိုပွီး ဇူလိုငျလ (၃၀) ရကျနေ့ ည (၈) နာရီလောကျက ဝါဆိုရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဇူလိုငျလ (၂၆) ရကျနကေ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အသကျ (၂၅) နပွေ့ညျ့ မှေးနလေ့ေးဖွဈပွီး သူမရဲ့ မှေးနအေ့တှကျ ခဈြသူနဲ့ သူငယျခငျြးမြားက birthday surprise လေးမြား လုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖွိုးလေးက ခဈြသူ သဘောကနြတေဲ့ အိတျလေးကိုပါ လကျဆောငျပေးခဲ့တာကွောငျ့ ဝါဆိုတဈယောကျ အတိုငျးမသိပြျောရှငျခဲ့ပါတယျ။
လူငယျမြားကွား ရပေနျးစားနတေဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲမြားထဲက တဈတှဲဖွဈတဲ့ အဆိုတျော ဖွိုးလေးနဲ့ သရုပျဆောငျ- အဆိုတျော ဝါဆိုမိုးဦးတို့အတှဲလေးက သူတို့ရဲ့အနုပညာနယျပယျအသီးသီးမှာ အောငျမွငျမှုကိုယျစီ ရရှိထားကွတဲ့ သူမြားလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခဈြသူသကျတမျး (၃) နှဈကြျော (၄) နှဈနီးပါး ရှိပွီဖွဈတဲ့ သူတို့အတှဲလေးက တဈဦးနဲ့တဈဦး surprise လုပျရတာ ကွိုကျတယျလို့သိရပါတယျ။
စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ စားနိုင်ဖို့ Gym သွားနေပြီ ဆိုတဲ့ ယွန်းယွန်း